श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा के–के विषय छन् ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा के–के विषय छन् ?
२०७० भाद्र ३, सोमबार ०४:१० गते
मिडिया सञ्चालन गर्ने अधिकांश सञ्चालकहरुलाई समेत साँच्चीकै श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा के विषय छन् भन्ने बारेमा कम जानकारी भएको पाइन्छ । अधिकार दिने र लिने दुवै पक्षले आफ्ना विषयमा बनेका कानुनका विषयमा स्पष्ट जानकारी लिन जरूरी छ । श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरु पनि जब समस्या पर्छ, तबमात्र ऐनको खोजीमा लागेको पाइन्छ । आफ्नो विषयमा बनेको ऐन त जुनसुकै समय भन्न र बोल्न सक्ने गरी थाहा पाइराख्नुपर्छ ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ र त्यसलाई संशोधन गरी २०६४ सालमा पारित गरिएका विषयमा हामी सबै श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । जब ऐनको कुरा आउँछ, हामी तलबको मात्रासँग मात्र केन्द्रित हुने गरेका छौँ । कुरो त्यति मात्र होइन, हाम्रो जिम्मेवारी र अन्य सेवासुविधाका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
हामीले ऐन र नियमावली दुवैका बारेमा गहिरो अध्ययन गर्न जरूरी छ । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली २०५३ र पहिलो संशोधन २०६५ लाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन भन्नाले कानुनी प्रावधान र नियमावली भन्नाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका हो ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनले श्रमजीवी पत्रकारको परिभाषा सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधानसम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्टिन्जर, समाचार वाचक, कार्र्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, वेब डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरा म्यान, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषासम्पादकजस्ता पत्रकारितासँग सम्बन्धित व्यक्तिसमेतलाई जनाउँदछ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
यसैगरी, कर्मचारीको परिभाषा सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाहेक त्यस्तो प्रतिष्ठानको प्रशासनिक व्यवस्थापकीय, प्राविधिक वा अन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति भनेर गरेको छ ।
कामदारको परिभाषामा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीबाहेक सञ्चार प्रतिष्ठानमा सञ्चार सामग्री वितरण गर्ने र उत्पादन गर्ने वा अन्य श्रममूलक कार्यमा संलग्न हुने व्यक्ति भनिएको छ । व्यवस्थापक भन्नाले कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति भनेर बुझाएको छ ।
ऐनमा नियुक्ति सेवाको सुरक्षा तथा काम गर्ने समयका बारेमा सबैभन्दा पहिला सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले आफ्नो सञ्चारमाध्यममा कुन तहको, कुन पदमा, कति जना कर्मचारी चाहिने हो, त्यो स्पष्ट रुपमा खुलाएर प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दिएको विवरणअनुसार आफ्नो सञ्चारमाध्यममा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछन् ।
श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदार राख्दा बिनानियुक्ति पत्र राख्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई छैन । हरेक सञ्चारमाध्यममा व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको विवरणअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदार छनौट गर्नुपर्दछ । तोकिएको अवधिमा नियुक्ति पत्र दिनुपर्दछ । आवश्यकता देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारको अनुमति लिएर मात्र आफ्नो संस्थामा भएका मध्ये १५ प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्र करारमा राख्न पाउने छन् । करारमा नियुक्ति पाउने कर्मचारीको पनि अन्य सेवासुविधामा पूर्ण कर्मचारीसरह नै हुनैपर्ने छ । ६ महिना परीक्षणको अवधि राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नियमावलीअनुसार कर्मचारीको भर्ना गर्दा एक महिनाको सूचना दिएर विज्ञापन गरेर मात्र खुल्ला रुपमा गर्नुपर्ने छ । विज्ञापनमा स्थायी वा अस्थायी के हो ? त्यसका लागि चाहिने योग्यता के–के हुन् ? खुलाएर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एक महिनाभित्रमा लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर कर्मचारी छनौट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । वैकल्पिक वा प्रतीक्षा सूचीमा रहने गरी दोस्रो व्यक्तिको नाम पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवश्यक रहेको कर्मचारीमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा रहेको छ । एउटै सञ्चार संस्थामा बढीमा ४ वर्षसम्म लगातार काम गरेको कर्मचारीलाई जेष्ठता वा अनुभवका आधारमा बढुवा गरी पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकले तोकेबमोजिमको सार्वजनिक बिदा पाउने छन् । यदि सार्वजनिक बिदाको दिनमा काम गरेमा त्यस दिनको सट्टामा अर्को दिन बिदामा बस्न पाउने छन् । यदि सट्टा बिदा दिन नसकेको अवस्थामा त्यस दिनको तलब भुक्तान पाउने छन् । सार्वजनिक बिदा सञ्चित गर्न पाइने छैन र सार्वजनिक बिदामा बस्ने पत्रकारले पूरा तलब पाउने छन् ।
भैपरी आउने ६ दिन र पर्व बिदा ६ दिन गरी वर्षमा १२ दिन बिदा पाउने छन् । यो बिदा सञ्चित हुन्छ । यो बिदामा बस्ने पत्रकारको तलब कटाउन पाइने छैन । यो बिदा आधा दिनको हिसाबले पनि लिन पाउने छन् । काम गरेको अवधिको हिसाबले हरेक १२ दिन काम गरेबापत एक दिनका दरले घर बिदा पाउने छन् । बेतलबी बिदामा बसेको पत्रकारले यो सुविधा पाउँदैनन् । घर टाढा हुने पत्रकारका लागि वर्षमा एक पटक घर आउन–जानका लागि ७ दिनको घर बिदा पाउने छन् ।
बिरामी बिदाअन्तर्गत पत्रकारले हरेक वर्ष १२ दिन बिरामी बिदा पाउने छन् । बेतलबी बिदामा बसेको अवस्थामा भने यो बिदा पाइने छैन । सञ्चार संस्थामा काम गर्दागर्दै बिरामी भएमा उपचारका लागि बिदामा बसेको कर्मचारीको तलब कटाउन पाइने छैन । बिरामी बिदाले नपुगेमा व्यवस्थापकले थप बिदा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सुत्केरी बिदाअन्तर्गत महिला श्रमजीवी पत्रकार गर्भवती भएमा सुत्केरीको अघिपछि गरी साठी दिन सुत्केरी बिदा पाउने छन् । उनले चाहेमा लगातार ६ महिनासम्म सुत्केरी बिदा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । बिदामा बसेको अवधि नोकरी अवधिमा जोडिने छ । पुरूष पत्रकारले भने आफ्नी श्रीमती सुत्केरी भएमा अघि वा पछि गरी १५ दिन सुत्केरी स्याहार गर्न बिदा पाउने छन् । यो बिदा कार्य अवधिमा दुई पटक मात्र पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस नियमबमोजिम बिदामा बस्ने पत्रकारले पूरा तलब पाउने छ । तर, ६ महिना बिदा माग गरेर बस्ने महिला पत्रकारले यो बिदाको तलब पाउने छैनन् ।
श्रमजीवी पत्रकारले बच्चाको स्याहारका लागि सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट बढीमा दुईवटा बच्चाका लागि जनही एकमुष्ट ५ हजार रूपैयाँ शिशु स्याहार भत्ता पाउने छन् । तर, कुनै श्रमजीवी पत्रकारको पति वा पत्नी एकै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत भएमा पुरूष श्रमजीवी पत्रकारले त्यस्तो भत्ता पाउने छैन । तीन महिनाभित्रमा बच्चाको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सञ्चार प्रतिष्ठानमा बुझाउनु पर्नेछ । यदि नबुझाएमा यो सुविधा पाउने छैन ।
किरिया बिदा पत्रकारले आफैँ किरिया बस्नु परेमा १५ दिन किरिया बिदा पाउने छ । महिला पत्रकारको पतिले किरिया बस्नुपर्ने भएमा निजले पनि १५ दिन नै किरिया बिदा पाउने छन् । यो बिदामा बस्दा पूरा तलब पाउने छन् ।
बेतलबी बिदाअन्तर्गत पत्रकारले विशेष प्रयोजनका लागि सञ्चित नहुने गरी बेतलबी बिदा पाउने छन् । सेवा अवधिभरमा एकै पटक वा पटकपटक गरी ३ वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने छन् । सञ्चार प्रतिष्ठानले आवश्यक ठानेमा २ वर्ष थप पनि गर्न सक्ने छ । तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि नपुगी कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारले बेतलबी बिदा पाउन सक्नेछैन । यो बिदा निजको नोकरीको अवधिमा गनिने छैन ।
श्रमजीवी पत्रकारले घर बिदा एक सय ८० दिनसम्म र बिरामी बिदा जति दिनसम्म पनि सञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सेवाबाट अलग भएको अवस्थामा यो बिदाको हिसाब गरेर एकमुष्ट रकम निजले पाउने छन् । यदि यो बिदा लिन नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा हकदार वा इच्छाएको व्यक्तिले सो रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकसँग बिदा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भैपरी आउने र पर्व बिदा भने मौखिक रुपमा पनि माग गर्न सकिन्छ । बिदा नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित हुने श्रमजीवी पत्रकारलाई गयल र तलब कट्टा गरी विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणनासमेत हुनेछैन । नियमावलीमा भनिएको छ, श्रमजीवी पत्रकारका लागि बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो ।
पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा ः
श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि एक दिनको तलबमा नघटाई मासिक तलबमा थप गरी तलब वृद्धि पाउने छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्न गरेको सिफारिसलाई २०६८ पुस १८ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जुन हालसम्म पनि कायम छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित र सुरक्षाका लागि व्यवस्थापकले एउटा कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कोषमा मासिक तलबबाट ५ प्रतिशत, लोक कल्याणकारी विज्ञापनमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाट १० प्रतिशत, सञ्चार प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष विज्ञापनबापत प्राप्त गर्ने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम र कुल नाफाको ५ प्रतिशत रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थापक र कुनै श्रमजीवी पत्रकारको संयुक्त दस्तखतमा चल्ने खाताका रुपमा खोलिनु पर्नेछ । यसको हरेक वर्ष लेखापरीक्षण अनिवार्य छ । यो कोषको रकम श्रमजीवी पत्रकार बिरामी, दुर्घटना, असाधारण परिस्थितिमा आर्थिक सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कामको सिलसिलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटनामा परी अंगभंग भएको वा चोटपटक लागेका कारण निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा सेवाका लागि असक्त भएको भनी नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई निजको जीविकाका निम्ति बाँचुन्जेलसम्मका लागि आसक्त वृत्तिबापत निजले खाइपाइ आएको मासिक तलबको आधा रकम कल्याणकारी कोषबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
स्थायी श्रमजीवी पत्रकारलाई निजले खाइपाइ आएको तलबबाट प्रत्येक महिनामा दस प्रतिशत रकम कट्टा गरी सञ्चार प्रतिष्ठानले सो रकममा शतप्रतिशत थप गरी निजको नाममा सञ्चय कोष जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैबीच श्रमजीवी पत्रकारले काम गरेबापत प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको तलबबराबरको रकम उपचार खर्चबापत पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम ५ लाख रूपैयाँको औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा गराउनु पर्ने हुन्छ । ५० प्रतिशत रकम श्रमजीवी पत्रकारले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियुक्ति दिएको पत्रकारको ६ महिनाभित्रमा बिमा गरिएको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सञ्चार प्रतिष्ठानले बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म स्थायी रुपमा सेवा गरेको श्रमजीवी पत्रकारले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका पत्रकारले वर्षको एक महिनाको तलब, १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका पत्रकारले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब उपदानस्वरुप पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारले हरेक वर्षमा आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको थप तलब चाडपर्व खर्चका रुपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयको कामको सिलसिलामा यातायातमा लागेको खर्च, बसाइँ खर्च सञ्चार प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
कर्तव्य, इमानदारितासँगै अग्रजलाई आदर र आफूमुनिकालाई उचित व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकार आचारसंहितालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने छ । सञ्चार प्रतिष्ठानको स्वीकृतिबिना कोही कसैसँग दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार वा चन्दा माग्न पाइनेछैन । कहीँ कतैबाट राम्रा कामका लागि प्राप्त भएका सञ्चार प्रतिष्ठानमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ ।
श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, टे«ड युनियनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि भने कुनै रोकावट नियमावलीमा गरिएको छैन । मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा उपस्थित हुन नहुने र पेसासम्बन्धी कामको सिलसिलामा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
अन्तमा, एक सञ्चारमाध्यम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुनका लागि लगानीकर्ता र श्रमजीवी पत्रकारहरुको मह¤वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले, दिने र लिनेका बीचमा बनेका कानुनको विषयमा अध्ययन गरी इमानदारिताका साथ कार्यान्वयनमा लाग्न सक्नु नै राम्रो हो । त्यसैले, दिनेले दिन र लिनेले लिन जानौँ ।